Meteorology paNet webhusaiti inozivikanwa mukuparadzira kweMeteorology, mamiriro ekunze uye mamwe sainzi anoenderana seGeology kana Astronomy. Isu tinoparadzira ruzivo rwakakomba pamisoro yakakosha uye pfungwa mune yesainzi nyika uye tinokuchengeta iwe uchifambidzana nenhau dzinonyanya kukosha.
Dare rekunyora reMeteorología en Red rinoumbwa neboka re nyanzvi mune zvemamiriro ekunze, mamiriro ekunze uye nesainzi yezvakatipoteredza. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
Vakapedza kudzidza muEnharaunda Sayenzi uye Master muEnharaunda Dzidzo kubva kuYunivhesiti yeMalaga. Ini ndakadzidza zvemamiriro ekunze uye mamiriro ekunze mumujaho uye ndagara ndichifarira makore. Mune ino blog ndinoedza kupfuudza ruzivo rwese rwunodiwa kuti tinzwisise zvishoma pasi redu uye nekushanda kwemuchadenga. Ndakaverenga mabhuku mazhinji pamusoro pemamiriro ekunze nemasimba emuchadenga achiedza kutora ruzivo rwese urwu nenzira yakajeka, yakapusa uye inovaraidza.
Ini ndiri Geologist, Master in Geophysics uye Meteorology, asi pamusoro pezvose ini ndinofarira zvesainzi. Wenguva dzose muverengi wemapepa e openwork esainzi akadai saSainzi kana zvakasikwa. Ndakaita chirongwa muVolcanic seismology uye ndikatora chikamu mune zvakatipoteredza maitiro ekuongorora maitiro muPoland muSudetenland uye muBelgium kuNorth Sea, asi kunze kwekugona kuita, makomo uye kudengenyeka kwenyika ndizvo zvandinoda. Hapana chinhu chakafanana nenjodzi yechisikigo yekuchengeta maziso angu akavhurika uye chengeta komputa yangu kwemaawa kuti undizivise nezvazvo. Sayenzi ndiko kudana kwangu uye kuda kwangu, zvinosuwisa, kwete basa rangu.
Ini ndakakurira kumaruwa, ndichidzidza kubva kune zvese zvakandikomberedza, ndichigadzira mweya wekuzvarwa pakati pekuziva uye nekubatana nemasikirwo. Sezvo makore anopfuura, ini handigone kubatsira asi kunakidzwa nehukama uhwo isu tese tinotakura mukati medu kune zvakasikwa nyika.
Zita rangu ndinonzi Antonio, ndine degree reGeology, Master in Civil Engineering yakashandiswa kuCivil Works uye Master kuGeophysics neMeteorology. Ini ndashanda semunda geologist uye seye geotechnical mushumo munyori. Ini ndakaitawo micrometeorological kuferefeta kudzidza hunhu mudenga uye yepasi pevhu CO2. Ndinovimba ndinogona kuunza tsanga dzangu dzejecha kuti ndiite kuraira kunonakidza senge mamiriro ekunze uye nekuwanika kune wese munhu.